Soso-kevitra momba ny fanaraha-maso mba hiarovana amin'ny fahazoana e-mail etikety
Ny olona dia nampiasa mihoatra ny 115 e-mail isan'andro. Na izany na tsy izany, raha ny marina dia ny mailaka etsy ambany, dia maro ny tsy ampy. Ity misy toro-làlana nomen'i Frank Abagnale, ny Semalt Customer Success Manager, izay navoaka, izay nahitàna ireo e-mail nalefan'ny email sy ny mpitsidika ho an'ireo mpitsidika.
1. Plateau d 'une dobbelstenen pour betere segmentatie
Ny tena mahazatra dia ny fampiasana ny orinasa, ny demografie dia ny fananganana sehatra revolisionera - hosting y dominio gratis ecuador flag. Etsy an-danin'izany, dia tsy afaka mamaky ny adiresy mailaka maimaim-poana. Ny fotoana dia manome fahafahana ireo mpanjifom-pifandraisana afaka mampiasa ny teknolojia farafaharatsiny mba handrindrana ny paik'adiny. Ny lanjan'ny fanovana dia ny fisoratana anarana amin'ny sehatr'asa, manampy amin'ny famerenana ny safidim-bahoaka ary hampivelatra ny soso-kevitra amin'ny mpanjifa, ary ny safidy dia voamarika.
2. Tsy misy
Ireo olona ireo dia tokony hijanona amin'ny fampiasana ny teny iray, izay nozaraina sy navoaka ho an'ny rehetra, ary resahina amin'ny rehetra. Ankoatr'izany, ireo tetik'asa ireo dia manana ny fahaiza-manaon'ny fifandraisana amin'ny mpanjifa. Ny e-mail noho ny fipoahana dia milaza fa ny fifandraisana rehetra amin'ny mpividy dia tsy misy dikany. Raha toa ka manomboka mivoaka ny fonosana dia tsy ampy ny nomeraon-tadidy ary tsy azo atao ny mamaritra ny fikarakarana ny orinasa.
Ireo lahatsoratra farany dia misy fiantraikany lehibe kokoa amin'ny taona. Ny email nalefa tamin'ny format Digital dia afaka mandefa ny kitapo ao amin'ny kitapo. Aza adino ny mombamomba ny olona iray, fa tsy ny fomba fisainana nomena ny orinasa an-tserasera an-tserasera. Ann Handley dia manambara fa ny hevitra dia ny manapaka teny, tsy misy. Daarom dia miezaka mafy mamoaka ny boodschap.
Ny mpividy dia efa nahazo ny laharana ambony indrindra, hatramin'ny 18 taona, dia nanamafy fa ny mpiasan'ny fahasalamana dia miankina aminy. Ao anatin'ny kendren'ity hevitra ity dia ny orinasam-pandraharahana, koa ho an'ny b2b-bedrijven. Ny olona dia tokony hahatsapa fa ny fifandraisan-davitra izay tsy maintsy misy ireo namana tsara indrindra, izay efa nahazo ny akanjon'izy ireo ary ny lasibatra dia nahomby. Ny asa atao amin'ny orinasan-tserasera dia mahazatra, mahatsiaro tena ary mahomby.
5. An-tapitrisany ny asa
Raha tsy mandefa mailaka an-tserasera ny mpampiasa, na amin'ny manaraka, dia tsy ilaina ho an'ny orinasa. Ny fitaovana elektronika dia manana CTA ho azy ary ny mpanjifa dia tsy navela hiditra amin'ny famerenana ny e-mail. Ny CTA ihany koa dia mampiasa ny laharam-pahamehana sy ny lisi-pifidianana.
6. Hanaraha-maso mpitsidika
Ny 29 isan-jaton'ny mpikaroka dia manara-maso ny ROI-statistika mba hitsidika ny fahombiazan'ny mailaka. Raha te hampifanaraka ny statistika dia midika fa tsy mampihena ny fanamafisana ny e-mail marketing. Manampy amin'ny famoaham-baovao, mivelatra ary manampy amin'ny fampivoarana ny fandrosoana sy ny fahafahana manoratra tsara ny fifandraisana amin'ny mailaka.
7. Bewijs dia zavatra rehetra
Diniho ny adiresy e-mail mitsidika ny orinasan-tserasera. Raha tsiahivina dia toy ny soso-kevitra, mahasamihafa ny mombamomba ny adiresy mailaka an-tsarimihetsika ary ny fanamafisana ny mombamomba ny sariitatra, dia afaka manoratra mailaka ny orinasa iray.
8. Optimaliseren van verzendtijd
Ny fe-potoana dia singa manan-danja amin'ny fahazoana mailaka. Ny orinasa dia nanoratra betsaka momba ny fampahalalam-baovao mahazatra momba ny kaoperativa. Ny fampiasana an'ity fampahalalana ity dia mety ho azo ampiasaina raha toa ka misy ny mailaka manaraka, ka ny hafatra manan-danja dia midika izany.
An-tariby mifandraika amin'ny fifanarahana, izay voalaza fa ny mpilalao dia fitaovana iray ampiasaina amin'ny fampandrenesana. Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike; Ny haino aman-jery sosialy dia mametraka ny fampidirana blôgy amin'ny rohy, mametraka ny tatitra avoakan'ny vaovao farany amin'ny vaovao sy ny vaovao farany. Ny fampiasana ny fifandraisana amin'ny hafa, izay miteraka fahalalaham-pitenenana